गरिब, विपन्न, अशिक्षित, बेरोजगार, स्वास्थ्य उपचार नपाउनेको वस्ति खोटाङबाट सम्झिएको छु, नमस्कार! जय नेपाल! नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट देशलाई बदल्छु भन्ने तपाईंहरु कांग्रेस भित्रका आशा र भरोसाका पुञ्ज हुनुहुन्छ, चम्किला नक्षत्र हुनुहुन्छ। तपाईंहरुको विषयमा सधैं यस्तै लेख्न पाऊँ, यस्तै सोच्न पाऊँ। भविश्यको गर्भमा स्खलित हुनुहुने छैन भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।धेरै प्रश्नहरुले उद्वेलित हुँदै, आशा र निराशाको मजाधारबाट यो चिठी लेख्दै छु।
अन्धराष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको हुरीले देश आक्रान्त छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु सुखद छैनन्। तर पनि कांग्रेसले यी महत्वशाली र गम्भीर विषयलाई सन्तुलनमा ल्याउन ठोस धारणा र कदम अख्तियारी गरेन। आज नेपाल मधेश, पहाड, हिमाल, जात, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र छिमेकी देशको नाममा बेजोड ढंंगले चिरा–चिरा छ। यी विभाजनका रेखाहरु मेटाउने विषयमा कांग्रेसले छाता दृष्टिकोण र छाता अभिभाकत्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? मलाई भनिदिनुहोस्, बिपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेरहरुको नाम मात्रै सम्झदा श्रद्धाले शिर झुकाउन मन लाग्छ, गर्वले छाति फुक्छ। त्यसको ठीक उल्टो अहिलेको नेतृत्वलाई सम्झिदा किन मनभरि तिरस्कारको पहाड निर्माण हुन्छ? किन लज्जावोध हुन्छ?
गगन थापा र विश्वप्रकाशज्यूहरु,दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि एसियाकै नौवटा देशहरुले आर्थिक क्रान्ति गरिसक्दा कुशासनका कारण हामी अल्पविकसित, विपन्न राष्ट्रकै नागरिकको हैसियतमा छौं। मेरो पुस्ताले ब्यग्ररुपमा मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्रको रुपमा देख्न र भोग्न चाहेको छ। नेतृत्वको इच्छाशक्ति, इमान्दारिता, नैतिक आचरण, आत्मविश्वास र पूर्णलगावले धेरै देशले एकै पुस्तामा आर्थिक विकासको उत्कर्स छोएका छन्। सिंगापुरलाई लि क्वान येउले आफ्नो शासनकालमा झण्डै चालिस÷वयालिस वर्ष अगाडिको माझिगाउँलाई आज विश्वस्तरीय देश सम्भव बनाए।
शनिबार, चैत्र ५, २०७३ १२:३९:२३